Mashiinka heerkulbeegga, Mashiinka Samaynta Koob Caag ah - GTMSMART
Hal qayb oo ka mid ah GTMSMART Machinery Co., Ltd.waa shirkad tignoolajiyada sare leh oo isku xidha R&D, wax soo saarka, iibka iyo adeega. Alaabtayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ahMashiinka Heer-kulka Tooska ah iyo Mashiinka heerkulbeegga koob caagga ah, Mashiinka Samaynta Caagagga, mashiinka koob warqad, mashiinka baaquli warqad, mashiinka saxan warqad iwm.Waxaan si buuxda u hirgelineynaa nidaamka maaraynta ISO9001 waxaanan si adag ula soconaa habka wax soo saarka oo dhan. Dhammaan shaqaaluhu waa inay qaataan tababar xirfadeed kahor shaqada. Nidaam kasta oo habayn iyo isku-ururin kastaa wuxuu leeyahay heerar farsamo oo saynis ah oo adag. Kooxda wax soo saarka ee heer sare ah iyo nidaam tayo leh oo dhamaystiran ayaa hubiya saxnaanta farsamaynta iyo isu-ururinta, iyo sidoo kale xasiloonida iyo kalsoonida wax soo saarka.
Mashiinka samaynta faakuumka caagga ah: Inta badan soo saarista weelal caag ah oo kala duwan ( saxaarad ukun, weel miro, weel baakad, iwm) oo wata xaashiyo heerkulbeeg ah, sida APET, PETG, PS, PSPS, PP, PVC, iwm.
Mashiinka heerkulbeegga koob caagga ah
Mashiinka heerkulbeegga koobabka Inta badan soo saarista weelal caag ah oo kala duwan (koobabka jelly, koobabka cabitaanka, weelasha baakadaha, iwm) oo leh xaashi heerkulbeeg ah, sida PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, iwm.
Mashiinkan heerkulbeegga ah ee loo isticmaalo soo saarista baahida sare ee la tuuri karo ee cuntada cusub/degdegga ah, koobabka caagga ah ee khudradda, sanduuqyada, taarikada, weel, iyo dawooyinka, PP, PS, PET, PVC, iwm.